Kun ololaa mitii hojiidhaan mirkansee Oduu qofaa miti goochaan agarsiise. -
Kun ololaa mitii hojiidhaan mirkansee Oduu qofaa miti goochaan agarsiise.
kunoo agarree jirraa
nuti hin qabnu gurra!
kan dharaan as geessan
Hin sobamnu lamuu
kute faashinni keessan.
tan biraa gad baasaa
Ragaan nu agarsiistan
Malee hin amannuu
Soba bakkan qabneef
lamuu hin gowwoomnu!
Hayyuun J’ haa bulu
Qeerroon haa jiraattuu
Kan sabaaf hojjatu
Umrii haa dheeratu!
Previous Magaazinni Kuufama Meeshaa Wayyaanotaa Goorootti Argamu Guutummatti Barbadaaye
Next THE AWFUL TRUTH OF ALFRED ILG FIREARM SMUGGLER: THE BITWEDED OF “MENELIK II” Part III